Netherlands " Journey-Assist - Holland. Zavatra tokony hatao. Fialam-boly. Hitan'ny olona.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Pays-Bas
Mihaona amin'i Netherlands! Fahafahana, fikosoham-bary, voninkazo sy maro hafa ... !!!
Ny Netherlands dia fanjakana misy mpanjaka araky ny lalàm-panorenana any andrefan'i Eoropa sy amin'ny nosy Bonaire, Sint Eustatius ary Saba any Karaiba.
Ny faritry ny fanjakana dia voasasa amin'ny Ranomasina Avaratra, ary miorina amin'i Alemaina sy Belzika.
Ny tanàna lehibe indrindra sy manandanja indrindra any Netherlands dia Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht.
Tamin'ny 2016, ny mponina ao Holandy dia kely noho ny 17 tapitrisa mponina.
Holandy sa Holland?
Ny Netherlands dia antsoina matetika hoe Holland, raha ny tena izy, Holland dia roa amin'ireo faritra roa ambin'ny folo ao Holandy - Hollande Atsimo sy Hollande-Hollande. Noho ireo faritra roa ireo no nandroso sy nalaza indrindra nandritra ny tantaran'ny fanjakana dia nantsoina hoe Holland i Netherlands.
Fa raha ny marina dia efa tamin'ny fomba ofisialy hatrany i Holandy ary i Holandy.
Inona no tokony hatao any Holandy? Interesting
Ny fikambanana malaza indrindra amin'ny Netherlands dia ny fikosoham-bolo taloha, ny tulip miloko marevaka, ny marijuana ara-dalàna, ny kiraro vita am-boalohany.
Fijery kliche an'i Netherlands - Windmills sy tulip
Saingy ny tena zava-misy, ity firenena ity dia tsy voafetra ho an'ny stereotazy etsy ambony ihany.
I Netherlands dia iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra any Eropa andrefana!
Ny mpitsidika dia miandry toetra tsy mahazatra, lapa maro, tanàna fahiny.
Ny zavaboary amin'ny netherlands
Zanse Schans. Village - Tranombakoka any Netherlands
Ary eny! Tavokely, tulabatra, tulip 🙂
Trano fahizay - Castle De Haar
Fortress Zvezda - Burtang. Pays-Bas
Mahagaga ny Holland!
Na izany aza, ny fizahan-tany any Holandy dia mijanona ho lafo noho ny vidin'ny fitsangatsanganana ny trano sy ny trano fonenana. Na izany aza, dia feno hipoka ny hotely Amsterdam. Anisan'ireo tanora indrindra ity firenena ity satria be mpampiasa satria mifandray amin'ny fahafahana.
Misy trano fialan-tsasatra maherin'ny 50 miaraka amoron-dranomasina amin'ny morontsiraky ny Ranomasina Avaratra sy ireo nosy Frisian Andrefana. Ny halavan'ny morontsiraka holandey dia 280 km. Izy ireo dia mety ho an'ireo izay tsy tia hafanana be. Eny tokoa, na dia amin'ny vanim-potoana mafana indrindra aza, ny mari-pana amin'ny rano dia tsy miakatra ambonin'ny +20 eto. Ny vanim-potoana fandroana eto amin'ity firenena ity dia manomboka amin'ny volana Jolay ary mifarana amin'ny volana septambra. Rakotra fasika ny morontsiraka. Betsaka amin'izy ireo no mitondra ny Hazo Manga, manamafy ny fanarahan'izy ireo ny fenitra eropeana.
Scheveningen Beach any The Hague, Holanda
Ary mitranga izany
Torapasika Aruba, Holandy
Domburg Beach any Zeeland
Torapasika amin'ny nosy Curacao, Holandy.
Endrika mampiavaka ny torapasika any Holandy:
Tsy mihoatra ny 20 ° C ny mari-pana na dia ao anaty vanim-potoana ambony
Rivotra mahery no mandeha eo.
Ny torapasika rehetra any Holandy dia mitambatra amin'ny fahadiovana, ny halavany ary ny fasika tsara.
Ary koa ny masoandro tsara tarehy manerana ny morontsiraka.
Ny torapasika an-tanàn-dehibe rehetra misy fotodrafitrasa tsara - kafe, trano fisakafoanana ary fotodrafitrasa hafa mifandraika amin'izany.
Tsy asa avy amin'ireny tora-pasika ireny ihany koa ny hetsika amin'ny rano.
antsitrika any Holandy
Azonao atao koa ny mandeha milentika any Holandy. Ny fotoana tsara indrindra ho azy dia ny fotoana manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Ny toerana filatsahan'ny diving dia hita any atsimo andrefan'ny Ranomasina Avaratra (faritr'i Ziland).
Nanamory ny fisakafoanana ny Holandy
Ny surf dia azo atao any atsimo andrefan'ny morontsiraka holandey. Ny vanim-potoana tsara indrindra ho azy dia manomboka amin'ny Mey ary mifarana amin'ny volana septambra. Ny toerana be mpitia indrindra amin'ny surf dia ny Domburg Beach any Ziland.
Surfing ao amin'ny Domburg Beach any Zeeland, Netherlands
Mandonja ny tora-pasika amin'ny tsy lavitra
Bisikileta ao Holandy
Maherin'ny antsasaky ny Holandy no mitafy lemaka, noho ny fivoaran'ny bisikileta eto. Afaka mandeha bisikileta avy amin'ny tanàna iray mankany amin'ny tanàna hafa ianao, satria misaraka tsy dia lavitra be izy ireo. Hita eny an-davaky ny faritra avaratry ny firenena ihany koa ny zotra, ary ao Dunrode, ary koa ny lalana maro mitaingina bisikilety izay hita ao amin'ny Lohasahan'i Gelderland.
Tena mivoatra ny bisikileta ao Holandy
Fitsangatsanganana bisikileta any Holland
Ny zandarimariam-pirenena ao Holandy dia mendrika ny hojerena (ecotourism)
Ahitana koa ny valan-javaboara 19 eto amin'ity firenena ity. Ny malaza indrindra amin'ireo mpizahatany dia ny Oosterskelde, Bisbosch ary Drunen.
Valan-javaboary Biesbosch - De Biesbosch
Nieuw Land National Park any Holandy
Toetany ao Holandy
Noho ny haben'ny firenena, ny toetrandro dia mitovy amin'ny faritra rehetra. Manan-kery eo amin'ny toetr'andro ny siklon-dririnina mangatsiaka avy amin'ny Oseana Atlantika. Ny mampiavaka ny toetrandro eo an-toerana dia ny hamandoana avo. Ny mari-pana antonony amin'ny volana Janoary dia manodidina ny +3, ary eo antenatenan'ny fahavaratra - tsy mihoatra ny +20. Amin'ny ankapobeny, ny toetr'andro any Netherlands dia azo antsoina hoe tsara ho an'ny rehetra. Tsy misy fanala mahery eto, ary koa ny hafanana mahareraka. Na izany aza, ny rivotra avy any andrefana matetika dia miteraka fiovan'ny hafanana maranitra, na dia mandritra ny vanim-potoana mafana indrindra aza.
Ny hafanana amin'ny andro sy ny alina ao Holandy mandritra ny volana maromaro
Hafa havanana any Holandy mandritra ny volana maromaro
Orana salanisan'ny volana isam-bolana any Holandy
Ny hafanana amin'ny rano any Holandy mandritra ny volana maromaro
Vanim-potoana any Holandy
Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny fialantsasatra any Netherlands dia ny lohataona. Amin'ny lohataona, afaka mankafy ny hafanana sy ny masoandro hatramin'ny farany tsara ianao. Manodidina ny +15 ny mari-pana amin'ny lohataona. Amin'ity toetr'andro ity no manomboka mamelana ny tulip malaza eo an-toerana, izay feno fofona manitra mahafinaritra ny rivotra.
Weather in Netherlands ankehitriny + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Holandy. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana ao Holandy
Netherlands dia tany misy fihetseham-po sy fahatsapana fa tsy marika. Noho izany, ny fiantsenana eto dia tsy mitovy amin'ny any Italia sy France. Ny mpizahatany eto dia tsy miandry boutiques be voninahitra, fa ny fivarotana misy fahatsiarovana, tsena parasy, ny tanana misy asa-tanana izay mahafinaritra ny hatsaran-tarehiny.
Ny souvenir holandey malaza indrindra ary mahaliana:
Klomps dia kiraro hazo foko ampiasain'ny tantsaha eto amin'ity firenena ity taloha.
Kiraro hazo - Klomps - ny fahatsiarovana tsara indrindra avy any Holland (Netherlands)
T-shirt na satroka amin'ny voasary. Ny loko volomboasary io no manana satroka fiadiana amin'ny andriana Oran mbola manjaka any Holandy.
Satroka volomboasary - karatra mpitsidika an'i Netherlands
Bong an'ny tanana noho ny fifohana sigara izay mitazona ny fahatsiarovana ny fahatanorana. Ny vokatra toy izany dia amboarina ao amin'ny The Hague nataon'ny Hulshoff Design Center.
Bong avy any Holandy
Tarehimarika seramika natao loko miloko manga sy fotsy novokarin'ny Royal Porcelain Factory, ao amin'ny Delft.
Ny seramika vita amin'ny loko dia fahatsiarovana tsara
Oram-peo voamarina izay azo vidy ao amin'ny Aalsmeer ao amin'ny Flora Holland Flower Exchange sy ny tsenan'ny voninkazo ao amin'ny Floating Amsterdam.
Volon-boninkazo ao amin'ny tsenan'ny voninkazo
Ny fifantohana lehibe indrindra amin'ny arcade fiantsenana miaraka amin'ny fahatsiarovana, salon na firavaka ary fivarotana misy akanjo misy marika dia any Amsterdam ao amin'ny "faritry ny arabe 9", st Damrak sy amin'ny pl. Ladies.
Ny vokatra ara-boafidy any an-drenivohitra Holandey dia atolotry ny tsenan'akoho fleer Westermarkt, Waterlooplein ary IJ-markt.
Tsenan'i Flea, Amsterdam, Holandy
Tsenan'ny Flea Delft
Tsena flea ao amsterdam
Ny làlam-barotra lehibe indrindra any Rotterdam, izay mankany amin'ny Beurs World Trade Center, dia manana anarana 2 - Koopgoot sy Boystraverse.
Beurs Shopping Shopping ao Rotterdam
Any The Hague, miandry ny Passage sy Maison de Bonneterie Shopping Center miaraka amin'ny vokatra avy amin'ny marika Ralph Lauren, Max Mara ary Hugo Boss ny lamaody rehetra.
Any amin'ny toeram-pivarotana Maison de Bonneterie
Eo amin'ny làlan'i Hague lehibe, antsoina hoe Wagenstraat, dia ny butikovan'ny marika Mexx. Ity angamba no hany marika holandey nahavita laza malaza manerantany.
Ny nahandro Holandey dia miavaka amin'ny fampiasana zava-manitra voafetra, ny fahatsorana ary ny fisian'ny akora, ary ny laconicism amin'ny ankapobeny. Tsy azo antsoina hoe voadio sy be pitsiny io. Miorina amin'ny hazan-dranomasina, trondro, hena, vokatra vita amin'ny ronono (voalohany, ny fromazy malaza eran-tany) sy ovy.
Tena mendri-kaja ny lovia - mitoto amin'ny bun 🙂
Tsotra sy afa-po ity lakozia ity. Na izany aza, amin'ny fialantsasatra any Holandy dia manomana lovia tany am-boalohany kokoa izy ireo miaraka amina alokaloka samihafa sy indraindray tsy ampoizina. Izany, ohatra, ny sakamalaho, ny voankazo ary ny voankazo masira ho an'ny hena, trondro eo amin'ny marinade tantely, vatomamy licorice (dia tsy mamy ihany fa masira koa).
Ny karazan-tsakafo hohanina amin'ny sakafo maraina sy antoandro eto amin'ity firenena ity. Ho manokana, ny karazana sandwich sy sandwich amin'ny habe samihafa.
Sakafo maraina mahazatra
Snack malaza iray hafa dia antsoina hoe uitsmijter. Miavaka ny fanomanana azy noho ny fahatsorany voalohany - mofo iray no rakofana tapa-kazo, avy eo - miaraka amina fromazy, ary avy eo - miaraka amina atody endasina. Afaka mahita sandwich mora foana toy izany ianao amin'ny fivarotana sakafo haingana. Sarotra kokoa ny mahita lovia mafana alohan'ny 17 hariva (izay rehefa misokatra ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana) noho ny sandwich ham.
Sandwich mahazatra holandey (Holandy)
Ny reharehan'ny Holandy dia fromazy avo lenta. Ny karazany ny fromazy dia malalaka eto. Ny malaza indrindra dia ny Holandey, Leiden ary Edam. Tsara homarihina ihany koa ireo fromazy vita amin'ny rononon'ondry sy osy .. Afaka mitsidika ronono fromazy eo an-toerana ihany koa ianao hanandrana fromazy isan-karazany (sakafo, ronono, masiaka sns.).
The cheeses malaza eran-tany
Netherlands dia firenena mendrika tsidihina
Coat of arm of the Netherlands
Fiteny: Iraniana. Holandey, West Frisian
Kaody finday: 31 +
Sehatra Internet: .nl